TMSC waxay soo saartaa bandhigyo yaryar oo OLED ah oo loogu talagalay mustaqbalka "Apple Glass" | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah farqiga weyn ee u dhexeeya Apple y Samsung, Tartameheeda ugu weyn, ayaa ah in ta labaad ay soo saarto waxyaabo, tan koowaadna ma sameyso. Shirkadda Kuuriyaanka ah ayaa ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta shaashadda OLED ee loo yaqaan 'iPhones', kuwa ka imanaya Cupertino ayaan aad u maaweelin.
Marka Apple wuxuu iskaashi la sameeyay CSMT Waana ku dhowaad "ku qasbidda" qalabka wax lagu shubo ee loo yaqaan 'chipmaker' inuu sidoo kale bilaabo soosaarida boodhadhka yaryar ee mustaqbalka ee soo saari doona mustaqbalka "Apple Glass", oo markaa mar kale kuma tiirsanaan Samsung. Waan arki doonaa haddii ay helaan.
Sida lagu sheegay warbixin ku jirta Nikkei, Apple waxay iskaashi la sameysay Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) si loo horumariyo cusub Bandhigyada micro OLED "Ultra-Advanced" oo ah xarun qarsoodi ah oo ku taal Taiwan. Qalabkaani waxay noqon doonaan qalabyada soo socda ee Apple ee soo kordhay.
Bandhigyada Micro OLED ayaa si toos ah loogu dhisay canjeero chip halkii aad ka dhigan lahayd muraayad quraarad ah. Tani waxay ka dhigeysaa inay noqdaan kuwo khafiifa, yar yar oo tamar badan. Muuqaaladan yar ee OLED waxay ku habboon yihiin aaladaha yaryar sida muraayadaha casriga ah ee Apple lagu xantaa inuu ku shaqeynayo.
Miniscreens-yadaani waxay u muuqdaan inay ku jiraan marxaladda koowaad ee wax soo saarka tijaabada waxayna noqon doontaa dhowr sano ka hor inta Apple iyo TSMC ay diyaar u yihiin wax soo saar ballaaran. Waa la rakibi doonaa mustaqbalka Glass Apple in Apple qorsheyneyso inay soo bandhigto, malaha sanadka 2023.
MicroOLED iyo microLED
Marka laga soo tago ka shaqeynta muuqaalka micro OLED ee warshadaha TMSC ee ku yaal Taiwan, Apple sidoo kale waxay baareysaa tikniyoolajiyadda microLED, oo leh khadadka wax soo saarka tijaabada ee labada nooc ee bandhigyada. Warbixin Juun 2020 ayaa tilmaamtay in Apple ay $ 330 milyan ku maalgalisay warshad Taiwan ah oo soo saarta muuqaalka microLED ee Apple Watch, iPads iyo MacBooks oo ay weheliso iibiyaha Epistar. Waxaas oo dhan kuma xirna tiirarka Samsung.
Sida laga soo xigtay NikkeiApple waxay leedahay dhismayaal shaybaarro cadaan ah oo aan sharciyeysneyn oo kuyaala Longtan Science Park ee Taiwan, diiradda saaraya tikniyoolajiyadaha cusub ee la soo bandhigo, oo leh meesha masaafada u jirta baaritaanka qalabka dhirta iyo baakadaha ee TSMC.
Apple waxay shaqaaleysiisay shaqaale la xaqiijiyay oo ka socda shirkadda soo saarta AU Optoelectronics si ay uga shaqeeyaan micro OLEDs. Kuwani "wareejinta" waxay ku xiran yihiin heshiisyo adag oo ah sirta taas oo ka mamnuucaysa xitaa la kulanka asxaabta ama dadka aqoonta u leh ee ka shaqeeya warshadaha casriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » TMSC waxay soosaaraysaa waxyaabo yar yar oo OLED ah oo loogu talagalay mustaqbalka "Apple Glass"